Tsy fantatra intsony izay anton’izany hany ka tsy misy izay tsy mitaraina ireo lehibena koperativa. Ho an’ny koperativa 133 miazo an’Itaosy ohatra dia vao 100 monja amin’ireo olona 600 tokony hahazo izany no nahazo ny anjarany hatreto. Tao anatin’ny tapa-bolana anefa izay no efa niainan’ny rehetra ilay fihibohana ka tsy nahafahana niasa nitady vola. Raha mitohy izao hoy ny lehiben’ity koperativa ity dia 2 volana eo ho eo vao hahazo ny anjarany ireo olona 600 ao anatin’ny koperativa 133 hiadidiany, fizarana izay efa mety ho tafiditra ao anatin’ny fotoam-piasana indray ka hanakorontana zavatra maro. Toromarika farany azony araka izany ny tsy tokony handefasana ireo mpamily sy ny mpanampy azy hilahatra eny amin’ny lapan’ny tanàna toy ny teo aloha intsony. Handefa hafatra an-telefaonina indray mantsy hono ny kaominina manomboka izao milaza ny isan’ny olona tokony hilahatra eny an-toerana izay vao mandeha ireto farany. Miantso ny mpamily sy mpanampy azy tsy handany andro eny amin’ny lapan’ny tanàna intsony araka izany ny lehiben’ity koperativa ity fa miandry ny antso avy any aminy aorian’ny hafatra an-telefaonina azony avy any amin’ny kaominin’Antananarivo renivohitra.